HeartBeat Nepal बर्ड फ्लूका कारण हजारौँ कुखुरा मरे - HeartBeatNepal
March 15, 2019 Madan Oli
हेटौँडा – दुई साताअघि हेटौँडामा हजारौँ कुखुरा मर्नुका कारण बर्डफ्लु नै भएको पुष्टि भएको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार परीक्षणबाट बर्डफ्लु प्रमाणित भएकाले चारकिल्ला तोकी नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन गरी सकिएको छ ।
हेटौँडाका किसान कुलप्रसाद चौलागाईंले पाल्नुभएको कुखुराको नमूना परीक्षणमा बर्डफ्लुको जिवाणु रहेको पुष्टि भएको हो । दुई साताअघि करौडौँको क्षति हुने गरी दुई दिनको अन्तरालमा हेटौँडाका केही कुखुरा व्यवसायीको हजारौँ कुखुरा मरेका थिए । किसानले दिएको जानकारीअनुसार हेटौँडा–७ मा १० हजारभन्दा बढी कुखुरा मरेका थिए । भेटेनरी अस्पतालले एच नाइन भाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरे पनि बर्डफ्लु नभएको बताएको थियो ।
विशेष परीक्षणमार्फत नमूना पठाइएको १५ दिनपछि बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मकवानपुरका प्रमुख चेतनारायण खरेलले जानकारी दिनुभयो । “मकवानपुरमा बर्डफ्लु देखिएको पुष्टि भयो नियन्त्रणको विषयमा छलपल हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस सम्बन्धमा भर्खरै आपत्कालीन बैठक सम्पन्न भई नियन्त्रणको काम शुरु भइसकेको बताउनुभयो । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको व्यावसायिक कुखुरापालनका लागि पकेट क्षेत्र मानिने क्षेत्रमा किसानका हजारौँ कुखुरा केही दिनको अन्तरालमै सखाप भएपछि चिन्तित बनेका किसान बर्डफ्लु प्रमाणित भएपछि थप चिन्तित बनेका छन् । हेटौँडा ८ का किसान सुवर्ण अधिकारीले ऋण गरेर कुखुरा पाल्न शुरु गरेको र अब के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताएको बताउनुभयो ।
लगानी गर्ने हैन त जनताको जलविद्युतमा ?
सरकारको विज्ञान-प्रविधि नीति सार्वजनिक : नीतिमा के छ ? (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । अहिले आधुनिक मोवाईल प्रविधिको जमाना छ । जो कोहीको हातमा मोवाईल फोन पुगेकै छ...
July 22, 2018 Madan Oli 0
खसीको मासु स्वादिष्ट कसरी बनाउने ? ‘मटन बिर्यानी’को बारेमा विशेष जानकारी
संसारमा साहाकारी भन्दा मांसाहारी धेरै छन् । मासुका परिकार पारखीहरुका लागि यो समाचार प्रभावकारी हुन सक्छ...
ब्यानर न्युज स्वास्थ्य
July 21, 2018 Madan Oli 0
गर्मी बढ्यो, स्विमिङ पुल बढेनन् !
५ साउन, विराटनगर । साउन महिनामा पर्याप्त पानी नपरेका कारण पूर्वी तराईमा ४० डिग्री आसपास गर्मी...
ब्यानर न्युज समसामयिक स्वास्थ्य
सुदूरपश्चिमको पृथक दसैँ : दौडाउँदै दिइन्छ राँगाको बली
‘वर्षभरमा बिक्ने खसीबोकाको मासु दसैंको १० दिनमै बिक्छ’
रोशनी शाही र उनका पति चित्रजंगबीच डिभोर्स गर्ने लिखित सहमति
‘कृपा’मा कुमार बस्नेतदेखि सुशान्त केसीसम्म
महरा प्रकरण : किन भइन् ‘पीडित’ युटर्न ?
साइको समाज !
रोशनी शाहीको सुरक्षामा एक असई र प्रहरी खटाइयो
महरालाई महिलाको म्यासेज : ‘तँ न माफीको लायक भइस्, न मायाको लायक’